Fihetseham-batana miady amin'ny heloka krim-bozaka OPEN INVITE - Society Society
Mino ny tanora izay mahavita ny tsy mampino
Midira ao amin'ny ekipan'ny Element
Sarintany ao amin'ny Sheffield Youth Charities
Ny fanoloran-tenantsika ho an'ny NCS
Midira ho an'ny NCS
Efa nosoratana anarana ve?
Tohano ny asantsika
Fihetseham-piraharahana miady amin'ny famonoan-tsakafo OPEN INVITE
Oktobra 5, 2018
Taratasy misokatra ho an'ireo mpitondra ao an-toerana, mpanao politika, tanora mpiasa, profesora, oniversite, sampan-draharaham-panjakana, tanora, vahoaka ary izay maniry ny famonoana an-jatony eny an-dalambe.
Fantatry ny rehetra fa ny olana amin'ny krizy dia olana goavana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy eo an-toerana, indrindra ny tanora.
Tsy maintsy miara-miasa amin'ny tanjona amin'ny famonoana ny heloka bevava avy amin'ny tanànantsika isika. Zava-dehibe ny fifandraisantsika rehetra, miaraka amin'ny vondrona miray hina, miaraka amin'ny hafatra mifatotra sy ny dinidinika fanampiny.
Ny ekipanay ao amin'ny Element dia niara-niasa tamin'ireo mpiara-miasa, anisan'izany ny Polisy ao South Yorkshire sy ny Sheffield Hallam University mba hanao fanadihadiana voalohany momba ny fomba fijerin'ny tanora amin'ny tompony sy ny heloka bevava.
Ny antonta voalohany amin'ny antontan-kevitra sy ny antontanisa dia vonona ary nampidiriko ao amin'ny faran'ny blôgy ity. Ny isan'ny 132 tanora 16-17 dia efa nisy fanadihadiana. Ny fanadihadiana dia mandrakotra ny faritra rehetra ao Sheffield. Manitatra ity habeny ity isika mandritra ny volana vitsy manaraka.
Misy tanora 30 eo ho eo (taona 16 hatramin'ny 18) izay te-handray anjara amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fisorohana ny heloka an-tserasera. Ireo tanora ireo dia nanatsara ny votoaty sy ny fanentanana fanentanana. Hanana asa famotsoran-keloka maimaim-poana ho an'ny sekoly sy mpampianatra hafa ao Sheffield ihany koa izahay.
Misy resaka maro hafa momba ny heloka bevava an-jatony ao an-tanàna. Tianay ny mitondra ireo resaka ireo mba hanao fihetsika mahomby araka izay azo atao amin'ny fampihenana ny fiantraikan'ny herisetra amin'ny antsy sy ny fametrahana drafitra tsara ho an'ny ho avy.
Ny mpiara-miasa Will Earp (will.e@elementsociety.co.uk / 0114 2999 210) dia miara-miasa amin'ny fiarahamonintsika amin'izao fotoana izao.
Mifantena azafady raha tianao ny handray anjara amin'ny resadresaka ao amin'ny tarika, na hiresaka amin'ny tenanao sy Will.
Aza misalasala mandefa ity blaogy ity ho an'ireo izay inoanao fa tokony ho anisan'ny resadresaka.
Mirary ny soa indrindra,
Fisehoan-kevitra mialoha * Fanadihadiana (n = 132) Ny tanora nanadihady:
Ny 90% ny olona izay nitondra antsy dia manana namana izay mitondra mitondra antsy
Ny 43% izay mitondra antsy dia miaina amin'ny S6 na S7
Ny 52% izay nitondra antsy dia British White
Ny 73% mino fa ny olona dia mitondra antsy ho an'ny fiarovana, mahatsapa ho tsy azo antoka
Ny 16% mino fa ny olona dia mitondra antsy noho ny asa mifandray amin'ny andian-jiolahy
Ny 15% mino fa ny olona dia mitondra antsy noho ny lazany ara-tsosialy (heverina ho 'mahafinaritra' amin'ny namany).
Ny 57% tamin'ireo mpandray anjara dia nilaza fa misy ny heloka bevava noho ny asa mifandraika amin'ny andian-jiolahy, na fifanolanana / fifandonana eo amin'ny vondrona
Ny 67% tamin'ireo nitatitra ny nitondra antsy, dia namaly fa mitondra olona an-tsokosoko ny olona, ​​ary ny 63% dia namaly fa ny heloka bevava no mitranga noho ny asa atao mifandray amin'ny andian-jiolahy
(fanerena fa ny tanora dia mahatsapa fa mila mitondra antsy any amin'ny faritra misy sehatra izy ireo mba hiarovany tena)
* Fikarohana fikarohana izany ary ireto antontan'isa ireto dia nalaina avy amin'ilay santionana voalohany tamin'ny tanora 132, avy any Sheffield, taona 16-17, nanangona ny Jolay sy Aogositra 2018.
Manaiky ny politika fiarovana fiainan'olona *
NCS Graduate Opportunities - Vakio ity mba handray anjara!
Politika Fiarovana Fidio Momba ny GDP - http://www.elementsociety.co.uk/privacy-policy/
© 2019 Zo rehetra voatokana.